Zambia : Atahorana indray ny amin’ireo mpanao gazety ao amin’ny haino amanjerim-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Natao hiaro ny asan'ireo mpiasa ny lalàna mifehy ny famoaham-baovao.
Voadika ny 11 Oktobra 2019 17:41 GMT
Biraon'ny Zambia National Broadcasting Corporation. Sary nalain'i Kitwe avy ao amin'ny Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Mety ho lasa andraikitra mampatahotra ny fiasàna ao amin'ny National Broadcasting Corporation an'i Zambia (ZNBC) atsy ho atsy. Mikasa ny hametraka lalàna vaovao mifehy izay mifampiankina amin'ny lalàna ifampifehezan'ireo mpampita vaovao mantsy ilay Fikambanana.
Nampitandrina ilay filoha mpitantana ny ZNBC, John Mulwila, nandritra ny fampahafantarany ireo lalàna vaovao, fa izay rehetra mandika io pôlitika vaovaon'ny famoaham-baovao io amin'ireo raharaha vaovao na izay efa misy dia tsy vitan'ny hoe hampiharana ilay lalànan'ny fitsipi-pitondràna mifehy irery ihany fa koa hiharan'ny lalànam-pirenena mifehy ny mpiasa amin'ny haino amanjery sy ireo fikambanana.
Tamin'ny fanehoankeviny nandritra ny famoahana fandaharana iray vaovao tamin'ny fahitalavitra dia nanambara i Mulwila, izay sady mpisolovava, fa:
… Mifamatotra amin'ireo fikambanana mpiaro tombontsoa na ireo olontsotra ihany koa [ireo] fepetra noraisina. Izay mandika ireo fepetra ireo dia hiharan'ny lalàna misy ao Zambia sy anatin'ireo sampandraharaha hafa mifehy ny fampitam-baovao.
Ny Sampandraharaha Tsy Miankina misahana ny Haino Amanjery no miandraikitra ny Fampielezam-baovao ao Zambia amin'izao fotoana izao. Misy andian-dalàna maro hafa mifehy ny fampitam-baovao, miainga any amin'ireo fitakiana ny firaketana ireo famoahana an-gazety mankany amin'ny lalàna ho an'ny fanalam-baraka sy ny fikomiana, izay mety hitondra any amin'ny fanagadrana ny sasany amin'ireo raha toa ka dikaina. Tsy namaritra moa i Mulwila hoe ahoana no ampiharana io lalànam-pirenena io amin'ireo mpiasan'ny haino amanjery. Tsy mazava ny mety ho fiantraikan'io pôlitika io eo amin'ny fifandanjan'ny andraikitra eo amin'ireo mpanao gazety sy ny haino amanjery namoaka ilay vaovao raha toa ka misy ny fanitsakitsahana ny lalànam-pirenena–misy ahiahy sasantsasany mandeha ny amin'ny mety handraisana ireo mpanao gazety ho tompon'antoka mihitsy amin'ny fandikàna, fiovàna izay mety hanimba ny fahalalahan'ny fampitam-baovao ao amin'ny firenena.
Amin'izao, ireo hetsika ofisialy ataon'ny governemanta sy ny antoko mpitondra no tena rakofan'ny ZNBC, mahalana ihany vao mamoaka ny fijerin'ireo antoko mpanohitra sy ireo mpanao kiana izy. Vao mainka hanositosika an-jorombala ireo olona sy ireo fikambanana manana hevitra tsy mitovy io lalàna vaovao io.
Tao amin'ny The Ultimate Zambia Media Critique, naneho ny heviny momba anà resaka iray tanaty Facebook valin'ilay fanambaran'i Mulwila ilay bilaogera Bruce Chima:
Nampanahy ireo Zambiana manampahaizana amin'ny fampitam-baovao ny fanambaran'i Mulwilwa raha tena mitaratra ny votoatin'ity antontantaratasy mbola tsy navoaka ampahibemaso ity marina tokoa, izay tena nahagaga azy ireo ny haben'ny zavatra voafoakany.
Notononin'ny Chooma ihany koa ny voalazan'ny filohan'ny Association of Zambia, Andrew Sakala, izay naneho ny ahiahiny ny amin'ny tsy hisian'ny fahalalahan'ny fampahalalam-baovao intsony raha toa ka marina ny fanambaran'i Mulwila.
Te hahita dika mitovy amin'ity lalàna ity aho, manantena aho fa hampahafantatra azy ampahibemaso ny ZNBC mba hahafahantsika manome fanamarihana am-pahalalàna ny zavamisy, fa ny tena zava-dehibe dia natao hampivoatra ny asa fanaovangazety matihanina sy manaraka etika ny pôlitika famoaham-baovao. Mampanontany tena ahy ny fomba hataon'ireo tsy mpiasa ao amin'ny ZNBC ka hahatonga azy ireo hanitsakitsaka ny pôlitika mba hisarihany sazy!
Nanatevin-daharana ny adihevitra ary tsy nitsitsy fitenenana ny bilaogera Nyalubinge Ngwende, manoratra ao amin'ny Brutal Journal:
Saika faly ihany aho raha mba notenenin'ny filoha mpitantana ireo mitazona toerana ara-pôlitika mankafy ny fanaovana antsojay ireo mpiasa ao amin'ny haino amanjerim-pirenena mba hanajanona ny fomba fataony, satria miaro ny asan'ireo mpiasa ny lalàna mifehy ny famoaham-baovao. Tokony nomena toerana bebe kokoa hitrandrahany ny talentany ireo mpiasa ary tokony notenenina hahatsapa fahalalahana satria amin'ity indray mitoraka ity dia harovana amin'ny mpanao pôlitika mavitrika be loatra na ireo mpikambana ao amin'ny birao ry zareo.
Andro vitsivitsy talohan'ny nanaonvan'i Mulwila ny fanambarany, namoaka izao tao amin'ny rindriny Facebook ilay mpanao fampihomehezana pôlitika Spectator Kalaki, mijery ny lafiny tsara amin'ny fahazoan'ny ZNBC ny fahaleovantenany amin'ireo mpanao pôlitika:
Rehefa lasa mahaleotena ny ZNBC dia hanapa-kevitra ny laharampahamehany eo amin'ny vaovao amin'izay, ka tsy hanara-drambo ireo minisitra etsy sy eroa toy ny alika kely intsony.
Taorian'iny fanambaran'i Mulwila iny, ireo manampahaizana manokana momba ny fampahalalam-baovao any Zambia – indrindra ny fampitam-baovao tsy miankina anaty aterineto, izay niatrika fandrahonana maharitra avy amin'ireo manampahefana nandritra ny taona maro — dia mila manara-maso akaiky ireo lalàna izay mety hitarika any amin'ny fampitahorana mpiasa sy ny fifehezana bebe kokoa ny fahalalahan'ny fampielezam-baovao.
Fiainana Manokana 21 Febroary 2019